लकडाउनकाे समयमा किन जानु पर्याे पर्लर यसरि घरमै बनाउन सकिन्छ फेसियल स्क्रब - Mitho Khabar
लकडाउनकाे समयमा किन जानु पर्याे पर्लर यसरि घरमै बनाउन सकिन्छ फेसियल स्क्रब
April 28, 2020 mithokhabarLeaveaComment on लकडाउनकाे समयमा किन जानु पर्याे पर्लर यसरि घरमै बनाउन सकिन्छ फेसियल स्क्रब
व्युटी पार्लर धाउने अनुकुलता छैन । घरभित्रै बस्नु परेको छ । यतिबेला कसरी आफ्नो सौन्दर्यको ख्याल गर्ने ? हेयर रिमुभरदेखि फेसियलसम्म गरिरहनुपर्ने महिलाहरुलाई अहिले केही असहज भएको हुनसक्छ । यद्यपि घरमै उपलब्ध सामाग्री एवं प्राकृतिक विधीबाट आफ्नो सुन्दरतालाई कायम राख्न सकिन्छ । पानीको बाफ लिने, घिउकुमारीको जेल लगाउने आदि थुप्रै विधी छन् ।
अतः यहाँ घरेलु विधीबाट स्क्रब गर्ने विधी दिइएको छ । फेशियल स्क्रब अनुहारको सौन्दर्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । छालाको प्रकार अनुसार हप्तामा दुई वा चार पटकसम्म स्क्रब गर्नुपर्छ । यस किसिमको स्क्रबले महिला तथा पुरुष दुबैको अनुहारमा समान फाइदा पुर्याउँछ ।
राम्रो फेशियल स्क्रबले अनुहार सफा बनाउँछ, ताजगी ल्याँछ र मृत्त छालालाई हटाउँछ । यद्यपी यसका लागि पार्लर धाइरहनुपर्छ भन्ने छैन । वा बजारमा पाइने कस्मेटिक्स नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन । घरमै उपलव्ध सामग्रीको स्क्रब बनाएर लगाउन सकिन्छ ।
फेसियल स्क्रबका लागि थुप्रै विकल्प छन् । जस्तो तपाईंसँग कुन सामाग्री उपलब्ध छ, त्यसैको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
ग्रीन टि, चिनी र महको मिश्रणबाट स्क्रब तयार गर्न सकिन्छ ।
नरिवलको तेल, कागती र चिनीबाट स्क्रब तयार गर्न सकिन्छ ।
टुथपेस्ट र नुनबाट पनि स्क्रब तयार गर्न सकिन्छ ।
मह र दालचिनीबाट स्क्रब तयार गर्न सकिन्छ ।
एउटा मगमा थोरै स्ट्रङ ग्रीन टि तयार गर्ने । यसमा प्राकृतिक रुपले एन्टि एजिङ गुण हुन्छ । यसले अनुहारको रुखोपन, कालो दाग आदि हटाउन सहयोग गर्छ । यद्यपी यसका लागि टि ब्याग भन्दा पनि खुला ग्रीन टि प्रयोग गर्नुपर्छ ।
ग्रीन टिलाई केहि चम्चा अर्को मगमा राख्ने र चिसो हुन दिने । अब त्यसमा चिनी मिसाइदिने । चिनी त्यती मात्रा लगाउनुपर्छ, जो धेरै बाक्लो वा धेरै पातलो हुनुहुँदैन । उक्त मिश्रणमा एक चम्चा मह मिसाइदिने । महमा प्राकृतिक एन्टि ब्याक्टेरियल र छालालाई नरम बनाउने मोश्चराइजिङ गुण हुन्छ ।
यसरी तयार गरेको स्क्रबलाई केहि हप्ता राखेर प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, यसलाई सुख्खा स्थानमा राख्नुपर्छ ।
प्राकृतिक रुपमा तयार गरिएको यो स्क्रबलाई बिस्तारै अनुहारमा लगाउने । जहाँ दाग छ त्यहाँ राम्ररी लगाउनु पर्छ । लगभग १० मिनेटसम्म औंलाहरुले मसाज गरेपछि एक भिजाएको सफा कपडाले सफा गर्ने र चिसो पानीले राम्ररी धुने ।
हामीले फेसियल गर्ने त भन्दछौं, तर यस्तो फेसियल कस्तो हुन्छ, कति प्रकारका हुन्छन्, कस्तो छालामा गर्ने भन्ने जानकारी हुनुपर्छ । फेसियल २५ वर्ष नाघेपछि मात्र गर्नुपर्छ भन्ने धारणा रहेको छ । तर जुन अनुहारमा धेरै मेकअप गरिन्छ, छालामा समस्या छ र धेरै फोहोर छ भने त्यस्तो व्यक्तिले चाँडो फेसियल गर्नुपर्छ ।
जस्तै मोडल तथा कलाकारहरु महिनामा एकपटक फेसियल गर्ने गर्छन् । तर छालाको बनावट उमेर र अवस्था हेरिकन महिनामा दुई पटकसम्म गर्नु उचित मानिन्छ । नियमित रुपले फेसियल गर्नाले मानिसको उमेर पनि कम जस्तो देखिन्छ ।
फेसियल भन्नासाथ सम्पूर्ण अनुहारको उचित हेरचाह र सफाई भन्ने बुझिन्छ । फेसियलले अनुहारलाई सुन्दर, सफा, चम्किलो र नरम बनाउँछ । आजको व्यस्त र भागदौडको जीवनमा मानिसले आफ्नो हेरचाह गर्न सक्दैन ।
त्यसमाथि पनि अनुहारको हेरचाह भनेको प्रमुख रुपमा पर्न आउँछ । त्यसैले मानिसले फेसियल अनिवार्य रुपले गर्नुपर्छ । किनकि यसले अनुहारको सुन्दरता बढाउनुका साथै आराम पनि दिन्छ ।
फेसियल गर्ने भन्दैमा जस्तो पायो उस्तो ठाउँमा र जे पायो त्यहीले गर्नुहुँदैन । यो सही ढंग र निपूर्ण हातले गर्नुपर्दछ । कहीँ कतै अलिकति गल्ती भएमा अनुहारमा नराम्रो असर पर्दछ ।
फेसियल पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । जस्तो : साधारण, गोल्ड, पर्ल, चकलेट, फ्रुट, एन्टिएजिङ, एन्टिचाँडो पिग्मेन्टेसन, थर्मोहव आदि । यसमा स्मरणीय कुरा भनेको छालाको प्रकारअनुसार फेसियल किटको प्रयोग गर्नु हो ।
धेरै प्रकारका फेसियलमध्ये थर्मोहब विशेष प्रकारको फेसियल हो । जुन एन्टिएजिङका लागि गरिन्छ । अर्थात् अनुहारको चाउरीपना नियन्त्रण गर्न यो फेसियल लाभदायक छ । यसलाई विशेष सावधानी र विशेष प्रक्रियाबाट गरिन्छ ।
फेरि अनुहारभरी क्रिम लगाउने र बाक्लोसँग र चिसो गजले छोप्ने । थर्मोपाउडरलाई चिसो पानीमा फिट्ने र चाँडो लगाउने (नाक, आँखा, मुखबाहेक) २५ – २५ मिनेट राख्ने र हलुका हातले तलबाट निकाल्ने । त्यसपछि कोल्ड कम्प्रेसन दिने र कभरिङ क्रिम लगाइदिने ।
थर्मोहब फेसियलले ओपन पोर्स, सुख्खा छाला चाउरी छाला, चाँया भएको छाला, ब्ल्याक हेड्स र ह्वाइट हेड्स भएको छालामा गर्दा लाभदायक हुन्छ । हाई ब्लडप्रेसर सेन्सेटिभ छाला र २५ वर्षभन्दा कम उमेर समूहकाले यो हब फेसियल गर्नुहुँदैन ।
कोरना भाइरसको औषधि जापानले नै पत्ता लगायो, ३४० विरामीमा प्रयोग गर्दा बिरामी निको भए !
आजको वि.सं. २०७७ असोज ५ सोमवार भगवान् शिवको दिन आज कुन कुन राशी को भाग्य कस्तो हेर्नुहोस
डोटीमा ९ वर्षीय बालकको ह,त्या